Wadahadalkii Galmudug iyo Ahlu sunno oo burburay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Wadahadalkii Galmudug iyo Ahlu sunno oo burburay
April 27, 2017 admin220
Guddigii dowlad goboleedka Galmudug u matalayay Wada hadalada u dhaxeeya Ahlusunna iyo Galmudug ayaa goor dhow shir jaraa’id oo ay ku qabteen Hotel Syl magaalada Muqddisho waxa ay ku dhawaaqeen inuu bur buray Wada Hadaladii ay la lahaayeen Ahlusuna ee ka socday magaalada Muqdisho.
Shirkan jaraa’id ayey Guddigu ku shaaciyeen inuu gebi ahaanba istaagay wada hadaladaas, isla markaana ay sii wadanayaan wixii hada ka dambeeya howshooda doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Guddoomiyaha Guddiga wada hadalka Galmudug, ahna Wasiirka Dastuurka iyo Dib u heshiisiinta Galmudug Cusmaan Maxamed Cali ( Cismaan Dheere) ayaa sheegay in dhinaca Ahlusuna ay wax ka socon waayeen.
Wafdiga Galmudug uga qeybgalayey wada hadalada ayaa la filayaa in waqtiyada soo socda soo gaaraan Cadaado, Sidoo kale maanta Cadaado waxaa yimid Musharax Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Beri ayaa la filayaa in Sidoo kale Cadaado soo gaaro Musharax Madaxweyne Galmudug Axmed Cali Hilowle Axmeed Shariif, beri oo jimce ah ayey ku eg tahay diiwaangalinta musharixiinta.
Daawo: Sh. Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay kooxda Alsaadicuun Bil Xaq